Waxaan baaraynaa Moto One 5G Ace | Androidsis
Waxaan baareynaa Moto One 5G Ace cusub
DaniPlay | | Motorola, Mobiles
Motorola waxay ku dhawaaqday qalab cusub oo ka baxsan taxanaha G, gaar ahaan taleefanka Moto One 5G Ace oo ah meel dhexaad ah oo leh jiilka shanaad. Telefoonku wuxuu noqonayaa ikhtiyaar aad u xiiso badan haddii aad raadineyso terminal wax ka qabta dhanka qalabka oo ku siiya adeegyada Google hab nadiif ah.
El Moto One 5G Ace Waxaa markii hore lagu dhawaaqay suuqa Mareykanka, laakiin wuxuu gaari doonaa suuqyo kale, iyadoo macno ahaan magaca ay shirkaddu dooratay noqon karo mid kale. Kadib markii lagu dhawaaqay cusub Moto G Stylus (2021), Moto G Power (2021) iyo Moto G Play (2021), soo saaraha dhinaca kale wuxuu ku dhawaaqayaa cutub loogu talagalay kuwa raadinaya waxqabadka iyo casriga xawaaraha.
1 Moto One 5G Ace, oo ah meel dhexe oo aad u xiiso badan
Moto One 5G Ace, oo ah meel dhexe oo aad u xiiso badan
El Moto One 5G Ace Waxaa loogu yeeraa inay noqoto terminal ka badan 6 inji oo xiise weyn u leh kuwa raadinaya taleefan waxqabad wanaagsan. Guddigu waa 6,7 inji oo leh xal buuxa oo HD + xarkahaasna way yar yihiin, kama fadhiyaan xitaa 10% qaybta hore.
Waxay taabaneysaa inay xoogga saaraan tusaale ahaan in shaashadda ay tahay nooca IPS LCD laakiin tiknoolajiyada LTPS, markaa waxay yeelan doontaa xallin sare iyo, haddii taasi aysan ku filnayn, ka duwanaansho ka wanaagsan. Qiyaasta dhinaca waa 20: 9 wax walbana waxaa lagu ilaaliyaa jiilka 5aad ee Gorilla Glass (Gorilla Glass XNUMX).
Processor-ku waa Snapdragon 750G, dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo ballan qaadaya waxqabad wanaagsan dhammaan noocyada beeraha, xitaa cayaaraha maxaa yeelay waa qayb ka mid ah taxanaha G. Ka sokow, waxay ku dareysaa 4/6 GB RAM, 64/128 GB RAM, dhammaantoodna lagu ballaarin karo MicroSD Afyare.
Batariga 5.000 mAh wuxuu balan qaadayaa inuu soconayo lana sii wado waxqabadka ku dhowaad maalin dhan, oo lagu dalacayo wax ka badan saacad 15W. Moto One 5G Ace wuxuu ku dhacaa ismaamul aad u weyn sida haddii aysan taasi ku filneyn, waxay nolol siin doontaa dadkaas sida weyn ugu isticmaala taleefanka bannaanka.
Motorola One 5G Ace ayaa la timid ilaa afar kamaradood, dhammaantood waxay ballanqaadayaan caqli macquul ah oo macquul ah, macnaha qabashadu waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican. Soo saaruhu wuxuu leeyahay saddex gadaal, midka ugu weyni waa 48 megapixels, kan labaadna waa 8 megapixels xagal ballaadhan kan saddexaadna waa 2 megapixel macro.
Kaamirada hore waxay taagan tahay shaki la'aan, hore waxay la socotaa kamarad 16 megapixel ah oo lagu dhex dhisay wax walboo kuu ogolaanaya inaad fiidiyoow ku duubeyso HD oo dhan. Sida haddii aysan intaas ku filnayn, waa daloollan tahay, waxay siisaa qaraar sare waana mid ka mid ah kuwa u yimaada inay qabtaan marka ay timaado awood u lahaanshaha qabashada nooc kasta oo jawi ah.
Waxaa jira afar kamaradood oo wax badan ka sheegaya nooc kasta oo bog ah maxaa yeelay waxaa ku jira AI (Sirdoonka Cilmiga ah) oo sawirro fiican ka qaada xaaladaha nooc kasta leh. Moto One 5G Ace waa mid ka mid ah boosteejooyinka doonaya inay tallaabo hore u qaadaan macnahaas iyo gaar ahaan sicirka la hagaajiyay oo ka yar $ 400.
El Moto One 5G Ace ayaa la timid xiriir aad u sarreeya, waa taleefan 5G ah hoostaga shabakadaha SA sida NSA, Bluetooth 5.1, Dual Wi-Fi, GPS waana Dual SIM terminal in lagu daro laba kaar oo taleefan ah, dhammaantoodna uu ku xiran yahay isticmaalaha.
Nidaamku waa Android 10 hoosta lakabka My Ux ka Motorola, waa wax nadiif ah oo waxay leedahay codsiyo aasaasi ah oo loogu talagalay isticmaalka taleefanka iyada oo marin loo helayo Play Store. Dhinaca kale, aaladda ayaa lagu furay farteeda dambe iyada oo loo marayo "M" ee Motorola.
MUUQAAL 6.7-inch IPS LCD (LTPS) oo leh Full HD + xallinta (2.400 x 1.080 px) / 20: 9
GRAPH Adreno 619
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 64/128 GB / Lagu Ballaarin karo kaararka MicroSD
KAAMARKA DAR 48 MP dareeraha ugu weyn / 8 megapixel dareeraha xagal ballaadhan / 2 MP macro sensor
CAMERA HORE 16 MP
BATARY 5.000 Mah oo leh 15W lacag deg deg ah
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 oo leh My UX
Isku xirnaanta 5G SA / NSA / Bluetooth 5.1 / WiFi Dual / GPS / Dual SIM
MUUQAALO KALE Akhriska Faraha
Qiyaasaha iyo Miisaanka: 166.1 x 76.1 x 9.9mm / 212 garaam
El Moto One 5G Ace ayaa ku yimid qiimo dhan $ 399 (326 euro oo ah sicirka sarrifka), oo yimid Janaayo 13 suuqa Mareykanka, waa la arki doonaa waxa ay ka heli karto caalami ahaan, waana la arki doonaa goorta ay imaaneyso Spain. Taleefanka waxaa lagu heli doonaa midab qalin ah iyo madow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Waxaan baareynaa Moto One 5G Ace cusub
[VIDEO] Waxaan ku tijaabinay One UI 3.0 Galaxy Note10 +: wararkeeda ugu fiican
Abuur kooxdaada xayawaanka iyo saaxirrada 33RD: Difaaca Random